Ukuguquka kwesimo sezulu kuguqula ukufika eSpain '' kwezinyoni ezingavamile '' | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Bucephala clangula (I-porrón e-Osculated)
Zonke izilwane zihlala zifuna indawo engcono yokuzivikela emakhazeni noma ekushiseni. Abaningi babo bachitha isikhathi esithile kude kakhulu nendawo abaphila kuyo, kepha njengoba izinga lokushisa lomhlaba liyakhula, isimilo sabo siyashintsha, njengoba kwenzeka "ezinyoni ezingandile" ezifika eSpain.
Ngokombiko wakamuva ovela kwikomidi le-SEO / BirdLife Rarities, elishicilelwe kumagazini wesayensi i-'Ardeola ', Izinhlobo ze-circumpolar zivame kakhulu, kuyilapho izinhlobo zase-Afrika zivame kakhulu.
Okwe SEO / BirdLife, lolu shintsho olutholwa izinyoni ezisenyakatho luhlobene nobusika obumnandi be-arctic, kanye naleyo eqala ukubonakala ezinhlotsheni eziseningizimu ngokufudumala okuqhubekayo koLwandle i-Atlantic. Ngakho-ke, isibonelo, i-orange bulbul (I-Pycnonotus barbatus), wokusatshalaliswa kwe-Afrika, itholakale eTarifa, lapho iqale khona ukuzala kabusha, kanye ne-booby enemilenze ebomvu (Sula sula), oyinyoni yasolwandle odabuka eCaribbean, useqale ukufika kule ngxenye yomhlaba.
Imininingwane edalulwe yilo mbiko, ehambelana nezinhlobo ezibonakalayo ku-2015, "ibalulekile futhi iyakhathaza", futhi ivumela iziphetho ukuthi zithathwe ngomphumela ushintsho lwesimo sezulu oluba nawo emvelweni, futhi ikakhulukazi izinyoni.
I-Pycnonotus barbatus (I-Orange Bulbul)
Izinyoni yizilwane, njengezinye, uma izimo zendawo yazo ziba ngcono zikhetha ukuhlala. Futhi yilokho, umnotho wamandla uyisisekelo ezintweni eziphilayo. Ngalesi sizathu, uhlu lwe-SEO / BirdLife lwezinhlobo zezinyoni ezingandile cishe luzokwanda njengoba iminyaka ihamba namazinga okushisa eqhubeka nokukhuphuka, ngaphandle kwalapho kuthathwa izinyathelo ezisebenza ngempela ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu.
Uma ufuna ukufunda umbiko, unga Chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kushintsha ukufika eSpain »ngezinyoni ezingandile»
Ukunyuka kwama-3-degree kungasongela ungqimba lwe-ozone